Real Estate Listings: » Business Directory » Furniture Companies » Zavamaniry sandoka1
Paositra momba ny paositra: WN4 9ST
Tongasoa eto amin'ny zavamaniry sandoka - ny trano misy antonony, tena izy ary fiainana toy ny zavamaniry artifisialy. Ny zavamaniry ao an-trano sandoka dia natao hampiasaina ara-barotra ary tratra an-trano manerana an'izao tontolo izao. Vita amin'ny vokatra samihafa izy ireo nefa ny malaza indrindra dia ny polyester sy plastika tombanana amin'ny landy. Betsaka ny olona no miantso azy ireo ho 'zavamaniry vilany sandoka', saingy efa elaela no nandinika fa vita tamin'ny akora landy tena izy ireo. Noho ny vidin'ny vidiny sy ny faharetan'ny polyester, ny zavamaniry mihantona sandoka ankehitriny dia mazàna no mamorona an'io fitaovana io noho ny landy rehefa jerena ireo taona 1970. Zavamaniry sandoka madinidinika maro no voahodina amina hetsika maro mba hanomezana endrika mety sy azo itokisana. Raha tsy takatrao ny rantsan-tananao maitso, dia mety ho safidy tsara kokoa ny zavamaniry sandoka mora vidy. Izy ireo dia manala ny fihenjanana amin'ny filàna maniry sy hitahiry ireo zavamaniry tena izy isan'andro, miaraka amin'ny fahalalana rehetra mitaky. Raha vonona ny hamatsy vola ianao hahazoana zavamaniry sandoka goavambe tena izy, dia tsy misy antony tokony tsy hifangaroany ary hijery voajanahary tanteraka. Raha tamin'ny andro taloha, ny zavamaniry sandoka lehibe dia tsy toa tena izy; azonao atao angamba ny milaza fa artifisialy izy ireo tamin'ny alàlan'ny fijerena azy ireo fotsiny. Androany, na izany aza, ny zavamaniry trano sandoka dia toa mitombina kokoa ary afaka manao zavatra betsaka kokoa amin'izy ireo ianao noho ny taloha. Ny olona sasany dia mahay mitazona zava-maniry sandoka mora vidy ary manana izany talenta izany, na izany aza ny hafa tsy afaka hitazona ny ain'ny zavamaniry hitandrina ny ainy. Rehefa mipetraka ao an-tranonao ianao ary manam-potoana hanondrahana azy ireo, tantara hafa izany, na izany aza, rehefa mipetraka ao amin'ny trano fatoriana ianao na amin'ny toerana hafa izay sarotra na dia ny manova ny rano aza, sarotra ny mitazona zavamaniry sy voninkazo sasany. velona. Ny zavamaniry any ivelany dia tsy natao ho an'ny rehetra. Ny olona sasany dia mankafy miaina amin'ny toerana ahafahany manana zaridaina ary hihorohoro raha omena zavamaniry zaridaina sandoka izy ireo. Tian'izy ireo ny ao an-jaridain'izy ireo mandritra ny ora maro na manana andraikitra hikarakara voninkazo maro isan-karazany manerana ny trano.